Shiinaha Warshad Anti-Fog Mirror iyo alaab-qeybiyeyaal. Donghua
Muraayadda Anti-Fog waxaa loo farsameeyay si ay ugu adkeysato kulaylka xaaladaha ugu adag. Caadi ahaan loo isticmaalo muraayadaha xiirista / qubeyska, muraayadaha ilkaha, iyo sawnada, codsiyada naadiyada caafimaadka.
• Waxaa lagu heli karaa daahan u adkeysanaya abrasion
• Waxaa laga heli karaa .039. Ilaa .236 ″ (1 mm -6.0 mm) dhumucda
• Waxaa la siiyay polyfilm, dhabarka dhejiska iyo shaashadda caadada ah
• Ikhtiyaar jillaab koollo la saari karo oo la heli karo oo la heli karo
Daawada ka hortagga ceeryaanta waxaa lagu dabaqaa muraayadda polycarbonate ee tayada sare leh ee Dhua ee Fasalka 10 ah
qolka nadiifka ah. Muraayadda Anti-Fog waxaa loo farsameeyay si ay ugu adkeysato kulaylka xaaladaha ugu adag. Caadi ahaan loo isticmaalo muraayadaha xiirista / qubeyska, muraayadaha ilkaha, iyo sawnada, codsiyada naadiyada caafimaadka.
Magaca Badeecada Muraayada Ka-hortagga-Cirka, Muraayada Madow, Muraayadaha Lacag La'aanta ah
Waxyaabaha Polycarbonate (PC)
Xajmiga xaashida 915 * 1830mm, caado-jarid u dhiganta
Dhumucdiisuna 1.0 - 6.0 mm
Maska duugista Polyfilm
Muuqaalka Caqli la'aan, aad u milicsiga, burburinaysa, nadiif ah oo nadiif ah, hayso ama laalaado
Dusha sare ee warqad alaab ah ama filim PE ah
Ku laabo warqad ama koolo laba dhinac ah
Ku daabac santuuq alwaax ah ama sanduuq alwaax ah
• Muraayadda Qubayska Qulqulaya
• Muraayad xiirid Muraayad
• Muraayada Musqusha ee Ceega-madoobaadka
• Muraayadda ilkaha
• Muraayadda sudhan gidaarka
DHUA waa soo saare tayo leh oo ugu fiican alaabada loo yaqaan 'acrylic (PMMA)' ee Shiinaha. Falsafadeena tayada leh waxay soo bilaabatay 2000 waxayna noo keeneysaa sumcad adag. Waxaan u fidinaa macaamiisha adeegyo xirfad-yaqaan ah iyo Hal-Joogsi ah annagoo dhammaynayna dhammaan howlaha soo-saarista ee samaynta xaashida hufan, dahaadhida faaruqinta, goynta, qaabeynta, heer-kulka iskeen u sameynta nafteena Waxaan nahay dabacsan. Waxaan bixinaa badeecad iyo adeegyo habeysan si aan kor ugu qaadno qanacsanaanta macaamiisha. Dhammaan alaabooyinkayagu waxaa lagu heli karaa cabbirro qaas ah, dhumuc, midabbo iyo qaabab ECT. Waxaan fahansanahay muhiimada ay leedahay keenista waqtiyada hogaaminta macaamiisheena, shaqaalaheena xirfada leh, kooxda howlaha howlkarnimada leh, habsami u socodka howlaha gudaha iyo maaraynta hufan waxay naga caawinayaan inaan hubino inaan fulin karno balan qaadyadeena 3-15 maalmood ee degdega ah.
muraayadda ka hortagga ceeryaanta
muraayadda ilkaha ee ceeryaamada
muraayadda ilkaha ceeryaamo la'aan
Muraayadaha Lacag La'aanta ah
muraayadda xiirta oo aan lahayn ceeryaamo
muraayadda qubeyska oo aan lahayn ceeryaamo
muraayad aan ceeryaamo lahayn
qubays muraayad aan lahayn
muraayadda qubeyska ee ceeryaamo
muraayadda aragtida dambe ee ceeryaanta